Microsoft inopa XCloud Game mazuva pamberi peGDC 2019 | Linux Vakapindwa muropa
Iyo GDC 2019 (Musangano weVagadziri Musangano) iri kukurumidza kusvika uye vese vanotsanangudza vari kugadzirira. Uye pamberi peizvi Google inopa kuburikidza ne vhidhiyo uchiperekedzwa neshoko kukuyeuchidza nezve kuratidzwa kwechiono chako chemutambo, «EIyo ramangwana remitambo yemavhidhiyo ”, iro gore rekutamba mutambo unonzi Project Stream.
Kune rimwe divi remari, Microsoft yakaratidza kuratidzwa kuri kurarama kweXCloud Project, yako yeramangwana yekushambadzira sevhisi.
Zvechokwadi, Gumiguru apfuura, Kareem Choudhry, mutevedzeri mutevedzeri wemutungamiri webazi reMicrosoft rekutamba gore, rakafumura basa remutambo wekumhanyisa chikuva pakukumbira kwekambani inotamba pane chero chinhu, kusanganisira nhare mbozha:
“Nhasi, mitambo yaunotamba yakarairwa zvakanyanya nemudziyo. Projekti xCloud yekucheka-kumucheto pasi rese tekinoroji yekutamba inokupa iwe rusununguko rwekutamba pane chishandiso chako chaunosarudza chisina kuvharirwa pane chakati mudziyo, uchibvumira vatambi kuti vave pakati pezvemitambo yavo.
Iyo software inogadzira Akavimbisawo humbowo gare gare gore rino kuti chirongwa ichi chichava chakavhurika ruzhinji., kuyedza kuramba kwayo kuwanda kwekubatana kubva kumativi ese epasi.
Asi kubvira ipapo pakanga pasina kutaurirana pazuva chairo rebvunzo. Nekudaro, iyo yeruzhinji kuratidzwa kweprojekti inovimbisa kuti kambani ichakurumidza kuzivisa mafeni kuti vakamirira kuyedza ruzivo rwemitambo yegore neProjekti xCloud.
1 Nezve iyo xCloud Project
2 Iyo ramangwana remutambo wevhidhiyo
Nezve iyo xCloud Project
Zvechokwadi, paMicrosoft Inside Xbox chiitiko, Microsoft yakaunza Forza Horizon 4, mutambo wemujaho, izvo se hova kubva kuAzure dhata nzvimbo kubva kukambani kuenda kune Android smartphone.
An Xbox One controller yakabatana nefoni kuburikidza neBluetooth, iyo inoratidza kuti zvichave nyore sei kuyerera mitambo kubva mugore kuenda kune nhare mbozha, zvinoenderana nevimbiso yakaitwa nekambani muna Gumiguru apfuura.
Pamusoro pechiratidziro cheveruzhinji cheiyo XCloud Project, Kareem Choudhry, mune meseji iri kuXbox saiti, akapa chiratidzo cheMicrosoft gore remitambo mutambo.
"Chimwe chezviitiko zvikuru muindasitiri yevaraidzo mumakore gumi apfuura ndiko kurerukirwa kwave nyore kuverenga, kuteerera kana kuona zvemukati zvemadhijitari (zvinowanzoyerera).
"Isu takaona kuti yakashandura nzira iyo vanhu vanoona mimhanzi nevhidhiyo, ichivabvumira kuti vanyure munzvimbo yavanoda uye mudziyo wakanaka kwavari izvozvi."
Microsoft yakafuridzirwa neiyi uye inogadzirira kupa imwe sarudzo kuti unakirwe nemitambo yemavhidhiyos.
Asi hazvisi zveMicrosoft kutsiva zvinyaradzo ne xCloud, Choudhry akadaro pablog rake.
"Tiri kuvandudza Project xCloud kuti isatore nzvimbo yemitambo, asi kupa sarudzo imwechete uye kuita kwakasiyana sevanofarira mimhanzi nevhidhiyo vanhasi," akadaro. “Tiri kuwedzera dzimwe nzira dzekutamba mitambo yeXbox. «
Iyo ramangwana remutambo wevhidhiyo
Rimwe zuva mushure mekuratidzwa kweXCloud Project, Google yakaita chiyeuchidzo joke, "kuti zuva rekuratidzira rePurojekiti Yekufambisa yanga ichiswedera."
Google inoona kuti izvo zvaanodaidza kuti "Ramangwana remutambo wevhidhiyo" zvichaunzwa pachena gore rayo rekutamba sevhisi iro ratove rakanyatso kuyedza paAassassin's Creed Odyssey mukubatana neUbisoft gore rapfuura.
Vhidhiyo yemitambo kutenderera ichine dambudziko rakakura, iro re latency. Nekudaro, iyo hofori yeInternet haina kuzeza kuitarisa muna Gumiguru apfuura neiyo beta vhezheni yeProjekti Stream.
Ndeipi iyo Google yakabhadhara se "muyedzo wehunyanzvi kugadzirisa mamwe ematambudziko makuru mukushambadzira."
Iko kusarongeka kweiyo Google yemitambo yemitambo mhinduro ichave yekupa mukana wekutamba rwizi zvakananga muChannel.
Google inotarisirwa kuunza yayo yega mutambo mutambo panguva imwecheteyo neiyo Project Stream sevhisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft inopa XCloud Game mazuva pamberi peGDC 2019